Muuqaalka Lcd, Module Lcd, Lcd Panel, Lcd Screen- Fursad
Shenzhen Chance Technology Co., Ltd. waxay haysataa khibrad 11 sano ah oo ku saabsan naqshadaynta iyo soo saarista bandhigyo yaryar oo LCD ah oo ka socda 0.96 ″ ilaa 13.3 ″. Waxaa jira 6 xariiq oo wax soo saar leh oo leh mashiinno si otomaatig ah u wada shaqeeya, mashiinno xoqan, mashiinnada COG + FOG, qalabka wax lagu shubo, qalabka mashiinnada lagu shiro ee BL-ka, iwm. 10 + shaqaale ka tirsan koox tayo leh iyo 200 oo shaqaale ah ayaa halkan u jooga inay soo saaraan waxyaabaha ugu fiican. Waqtiga ugu sarreeya, 100K kumbuyuutar kumbuyuutarrada LCD waxaa dhammaystiray qiyaastii 400 shaqaale ah halkan here
Waxaa jira 6 khadadka wax soo saarka oo leh dhammaan mashiinada otomaatigga oo buuxa
10 + shaqaale koox tayo leh iyo 200 oo shaqaale ah ayaa halkan u jooga inay soo saaraan waxyaabaha ugu fiican
Waqtiga ugu sarreeya, 100K kumbuyuutar kumbuyuutarrada LCD waxaa dhammaystiray qiyaastii shaqaalaha 400 halkan maalin kasta
5.5 inji 2160 × 3840 Qaraarka R63455 wad ...
New 3.95 inch 480 * 480 LCD guryo caqli badan
Qiimaha Exw 3.5 inch tft lcd 320 * 240 SPI + RGB inte ...
7.0 inji 1024 * 600 LVDS interface 400nits flexib ...
10 inch 800 * 1280 MIPI wiishka baska wiishka mach ...
2,4 inch 240 * 320 Xallinta IPS Spi Interface L ...
1.3 inch 240 * 240 cabbirka yar yar ee cabbirka yar yar ips t ...
Macaamiisheena ugu fiican ayaa nala shaqeeya
Waxaan haynaa tiknoolajiyada iyo alaabada ugu fiican
Qaab dhismeedka aasaasiga ah Qaab-dhismeedka aasaasiga ah ee shaashadda taabashada capacitive-ka waa: substrate-ka waa hal-lakab plexiglass ah, lakabka filimka hufnaanta hufan ayaa si isku mid ah loogu been abuuray dusha iyo gudaha dusha sare ee ...
Mabda'a shaqada ee taabashada taabashada ...
Guudmarka Mabaadi'da Awoodda shaashadda waxay u baahan tahay inay ogaadaan taabasho badan iyadoo la kordhinayo korantada is-weydaarsiga awoodda. Si fudud haddii loo dhigo, shaashadu waxay u qaybsan tahay qaybo kala duwan, iyo qaybo ka mid ah astaamaha is-weydaarsiga mid kasta oo ka mid ah ...
Teknolojiyadda shaashadda taabashada ah ee loo yaqaan 'capacitive touch screen' waxay isticmaashaa soo-saarista hadda jirka aadanaha inuu shaqeeyo. Shaashadda taabashada capacitive waa shaashad muraayad isku dhafan oo afar lakab ah. Dusha gudaha iyo isku xiraha shaashadda muraayadda ...
Mitsubishi LCD shaashadaha ayaa joojin doona producti ...
Waxaa jira noocyo badan oo shaashadaha LCD ee warshadaha Japan ah. Waqtigan xaadirka ah, noocyada yar-yar iyo noocyada kala duwan ee suuqa ayaa badanaa ah Kyocera LCD screens iyo Mitsubishi LCD screens. Mitsubishi wuxuu ku dhawaaqay inuu ...
Soosaarayaasha guddiga Shiinaha waxaa ka mid ah t ...
Waxaa saameeyay jadwalka wax soo saarka ee Samsung Display's 8.5-jiilka LCD ee Kuuriyada Koonfureed iyo xawaaraha gaabiska ah ee sameeyayaasha heerka labaad ee TV-yada loogu wareejinayo alaabada IT-ga, waxaa lagu qiyaasaa in shaashadda TV-ga ...